Hierarchy Visual: Fitsipika volamena 15 | Famoronana an-tserasera
Hierarchy fahitana: fitsipika volamena 15
Ny iray amin'ireo singa tena ilaina izay manome dikany Linear ny lahatsoratra sary dia ny an'ny ambaratongam-pahitana. Saingy mifanohitra amin'izay noeritreretintsika fa ny ambaratongam-pahefana ho toy ny singa mitambatra dia tsy hoe manana toetra miasa fotsiny fa misy koa fiatraikany fanampiny izay natiora estetika. Ary ny ambaratongam-pahefana dia manome firindrana sy hatsarana ankoatry ny fiasana ho fitaovana manohana ny firafitra biolojika amin'ny lahatsoratra hita maso.
Tsy tokony tsy raharahiantsika ny mety an'io anton-javatra io satria miasa toy ny singa mifehy izy io, manaparitaka ny vaovao amin'ny alàlan'ny fampidirana azy io amin'ny ambaratonga na ambaratonga mba ny mpamaky dia ho afaka hamily, handevona ary hahatakatra ny atiny izay arosonay amin'ny fomba mora kokoa sy tsiranoka kokoa. Ny asany voalohany dia ny manome torolàlana, andinin-tsoratra na tsipika hanarahana ny vaovao toy ny hoe varavarana misokatra ho an'ny vatan'ny fihevitsika. Nanjary zava-dehibe izy ary mazava ho azy fa tsy azo ovaina amin'ny endrika sary, sary, sary hosodoko na volavolan-tranonkala. Ireto ambany ireto dia handinika bebe kokoa ny foto-kevitra momba ny hierarchy maso miaraka amin'ny sary natolotry ny mpiara-miasa Designmatic izahay, manantena aho fa mankafy azy ianao ary aza adino fa raha manana fanontaniana na fandraisana anjara ianao dia mila mamela hevitra fotsiny izahay.
1 Teboka ifantohana
6 Toerana fotsy
7 Telozoro Visual
15 Fitsipiky ny fahatelo
Indraindray dia niresaka momba ny teboka ifantohana na ivon-toerana fitambarana ho toy ny mikraoba amin'ny fananganana iray manontolo izahay ary ho toy ny teboka manintona izay miantso ny mpijery voalohany. Tena zava-dehibe tokoa io faritra io ary ilaina ny ahazoanao antoka fa misy izany amin'ireo tetik'asa ampianarinao. Mba hamaritana fa nanamboatra teboka mifantoka sahaza ianao dia manaova fanandramana kely: Asehoy amin'ny olona iray na maromaro ny volanao ary anontanio azy ireo hoe inona ny teboka voalohany misarika ny sain'izy ireo mandritra ny telo segondra voalohany jeren'izy ireo. Raha mitovy hevitra amin'izany ny rehetra, dia midika izany fa nahavita ny asanao tamin'ny fomba mandaitra ianao. Raha tsy izany dia tokony hiezaka ny hamorona anao ianao mba hahazoana antoka fa misy io teboka io satria ilaina ny misarika ny sain'ny besinimaro.
Ny hetsika dia intrinsika amin'ny fotokevitra hierarchy satria rehefa misy hierarchy dia midika izany fa misy ny fikorianana ary tsy maintsy manaraka ny dia iray isika hisamborana ny hafatra ary tsy izany ihany, fa miaraka amin'ny hetsikay dia hampanan-karena ny atiny izahay ary hanampy vaovao data izay hanome fahatsapana fitomboana. Rehefa mandehandeha amin'ny kabary ataontsika isika dia hahita fihetsiketsehana, fitomboana ary fanamafisana ireo hevitra naroso. Hamarino tsara fa ao anatin'ny fananganana ataonao mandritra ity hetsika ity dia misy làlan'ny fampiroboroboana izay ahitan'ny mpamaky mandroso na mihalalina ny hafatrao fa misy sy fitomboan'ny nuansa.
Ny Golden Ratio dia mitovy amin'ny hatsarana hatrany. Raha mitady ny firindrana amin'ny ampahany amin'ireo singa rehetra mandrafitra ny endrikao ianao, ny fomba tsara iray hiantohana ny fisian'io firindrana io dia amin'ny alàlan'ny fampiasana ny rijan-teny volamena. Ny fampiasana azy matetika dia zavatra iray izay afaka manampy anao hahatratra izany firindrana izany.
Ny fanonerana ireo singa sy faritra mandrafitra ny kabary dia ho zava-dehibe ihany koa ary mazava ho azy fa hisy fiatraikany amin'ny tsiranoka miaina sy mazava. Ny fifandanjana dia tsy maintsy misy amin'ny lafiny maro: ny elanelam-potoana, ny habeny, ny orientation, ny fametrahana azy, ny tonony ... Ny fifandanjana dia manamora ny fahatakarana ary noho izany dia hahatonga ny volavolanao amin'ny sehatra miasa sy mora.
Ny lamina dia afaka manampy antsika mamorona gadona, tsy tapaka ary manamafy izany fahatsapana fihetsehana izany. Izy io koa dia mety ho lasa loharano an-tsoratra lehibe satria amin'ity fomba ity dia azontsika atao ny miantoka fa tsy hijery an-tsipirihany antsipirihany na votoaty narosonay tamin'ny endrika ny vahoaka.
Tena notanisainay tao amin'ny lahatsoratray momba an'i Timoty Samara izany: ny habakabaka fotsy dia toerana fiarovana ho an'ny hafatray. Izy io dia miaro azy amin'ny fanelingelenana satria amin'ny alalany isika dia manome antoka fa tsy hifangaro ny singa mandrafitra ilay lahateny, ny tsirairay amin'izy ireo dia tsy maintsy manana sisin'ny fiarovana na toerana "masina" izay tsy azo atao ny mandika lalàna.
Ny endrika telozoro dia tandindona mazava hierarchical ary be mpampiasa amin'ny fahitana satria manome ny fandanjalanjana tena mandaitra ny firafiny. Ny maha-tohanana azy amin'ny fotony manokana dia tsy ahafahan'ny firafitray tsy milamina, manome ihany koa ny fahatsorana izay, arakaraka ny tranga dia tsy maharary.
Fomba iray hanampiana nuansa sy dinamika izany. Ny filalaovana ny endritsika dia hahitantsika fa ny mpijery dia afaka manavaka ireo singa avy amin'izy samy izy ary manoloana ny ivohony amin'ny fomba fijery tsotra, ankoatry ny fanampiana ny firafitra dia azontsika atao ny mamadika ny habaka ratsy amin'ny endritsika.
Ny habe, ny loko, ny fianakaviana ary ny fandaminana ary koa ny fahaizan'izy ireo mamaky dia ilaina amin'ny fanomezana ambaratongam-pahefana, baiko ary fahaiza-mitantana amin'ny fizotran'ny famakiana.
Miresaka filaminana, resaka fifandanjana ... Fa ahoana kosa raha manapa-kevitra ny hiala amin'izany rehetra izany isika? Hanana endrika tsy milamina, misavoritaka ary mampidi-doza ve isika? Ny marina dia tsia, ny tontolon'ny famolavolana dia malalaka tokoa ary manome fahafaha-manao zavatra marobe ka amin'izany fomba izany dia afaka mahazo fahatsapana gadona sy hery maneho hevitra ihany koa isika, na dia eny, tsy maintsy fantarintsika ny fomba filalaovana ireo singa sy ny fanehoana azy rehetra. azo atao.
Izany no antony itarihantsika ny lalàna: Afaka mamorona korontana isika izay misy andian-dalàna izay miantoka ny fahombiazan'ny fananganana.
Mifamatotra tanteraka amin'ny foto-kevitry ny filaminana: Ny fampifanarahana ny singa tsirairay avy amintsika dia hanome antsika fahatsapana fahadiovana, ho hitantsika ny sehatra mora mirenireny.
Ny tsipika dia famaky ny hetsika, izy ireo no hazondamosin'ny fizotry ny famakiana na ny làlana. Izy ireo dia hitarika na hanome torolàlana ho an'ireo mpamaky antsika hahitana ny hafatra sy hahatakarana ireo singa tsirairay mandrafitra ny lahatsoratray.
Ity dia fomba iray hafa hanomezana lanja, famaritana ny fampahalalana ary famaritana izay singa tokony hasongadina amin'ny tranga voalohany ary iza amin'izy ireo no mila tazonina amin'ny ambaratonga faharoa kokoa.
Araka ny efa fantatsika, izy io dia ahitana ny fizarana ny endritsika amin'ny faritra samihafa amin'ny alàlan'ny tsipika roa amin'ny axis marindrano sy ny tsipika roa eo amin'ny tsanganana. Raha manao izany isika dia hahita habaka mizara zoro efatra. Ny fanisana an'ity toro-lalana na takelaka ity dia hahafahantsika mampifanaraka ny singa tsirairay izay ampahany amin'ny firafitra amin'ny fomba mazava.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Hierarchy fahitana: fitsipika volamena 15
4 fanadihadiana fanadihadiana tena mahaliana momba ny dokam-barotra
Lohahevitra 5 mamaly ambony indrindra momba ny Tumblr